Xiaomi အကြောင်း သိကောင်းစရာ - Myanmar End User
AndroidHardwarePC & MobileTechnology Explained
By Myanmar End User June 20, 2017 1470 views
ဖုန်းမှာ အဓိက Model နှစ်မျိုးက Mi နဲ့ Redmi ပါ။ Mi ကတော့ Spec မြင့်သလို ဈေးမြင့်ပါတယ်။ Redmi ကတော့ Spec မြင့်ပေမယ့် ဈေးသက်သာ အောင်ဖန်တီးထားပါတယ်။ အဲသည့် နှစ်မျိုးစီမှာ သာမာန်ထက် Screen Size ကြီးတဲ့ Note Serie တစ်မျိုးစီ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Mi Note နဲ့ Redmi Note ဆိုပြီးထပ် ရှိပါတယ်။ Mi , Mi Note, Redmi, Redmi Note ဆိုတဲ့ Model တွေပါ။ Mi Max နဲ့ Mi Mix ကိုတော့ သီးခြား အမျိုးအစားထဲ ထည့်ရပါလိမ့်မယ်။
Mi ကိုဝယျတော့မှာလား ? ဝယျလာလို့ စသုံးဖွဈပွီလား ? ဝယျမယျ့သူကိုပွနျရှငျးပွဖို့လား ?
ဖုနျးမှာ အဓိက Model နှဈမြိုးက Mi နဲ့ Redmi ပါ။ Mi ကတော့ Spec မွငျ့သလို ဈေးမွငျ့ပါတယျ။ Redmi ကတော့ Spec မွငျ့ပမေယျ့ ဈေးသကျသာ အောငျဖနျတီးထားပါတယျ။ အဲသညျ့ နှဈမြိုးစီမှာ သာမာနျထကျ Screen Size ကွီးတဲ့ Note Serie တဈမြိုးစီ ရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Mi Note နဲ့ Redmi Note ဆိုပွီးထပျ ရှိပါတယျ။ Mi , Mi Note, Redmi, Redmi Note ဆိုတဲ့ Model တှပေါ။ Mi Max နဲ့ Mi Mix ကိုတော့ သီးခွား အမြိုးအစားထဲ ထညျ့ရပါလိမျ့မယျ။
Mi ဖုန်းတွေမှာ Android ကိုအခြေခံထားတဲ့ စနစ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ MIUI (မီယူအိုင်) လို့ခေါ်ပါတယ်။ Android မှာပါတဲ့ Function တွေထက်ကျော်လွန်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Android ကိုအခြေပြုပြီး မွေးဖွားလာတဲ့ MIUI ဟာ Mi ဖုန်းတွေရဲ့အသက်ပါ။ Android version ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ MIUI ကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံးကို Feature တွေ ၉၉ ရာနှုန်းတူညီအောင် ထောက်ပံ့ပေးထားနိုင်တာမို့ Android Version ဟာ Mi အတွက် ကြီးကြီးမားမားအရေးမကြီးပါဘူး။ MIUI ကိုသာ အမြဲအဆင့်မြှင့်တင်ဖို့လိုပါတယ်။
MIUI ရဲ့အားသာချက်ကတော့ လိုသလို Customize လုပ်လို့ရတဲ့ အရာတွေရယ် ကမ္ဘာပေါ်က ထောင်ပေါင်းများစွာသော Developer တွေ Designer တွေကအလုပ်လုပ်ပေးနေပြီး အသစ်အဆန်းတွေ အမြဲ Up to date ဖြစ်နေတာရယ်။ Active ဖြစ်နေပြီး စက္ကန့်နဲ့ အမျှ လေ့လာစရာတွေ တိုးနေတတ်တဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Forum ကြီးရှိနေတာရယ်။ ဘယ်မော်ဒယ်ကိုသုံးသုံး လုပ်ဆောင်ချက် အားလုံးနီးပါး အတူတူရရှိနိုင်လို့ ကွဲပြားနေတယ် ခွဲခြားထားတယ်လို့ မခံစားရတာရယ် …
MIUI မှာ China ROM နဲ့ Global ROM ဆိုပြီး အဓိက ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။ တစ်မျိုးစီမှာ Developer ROM နဲ့ Stable ROM တစ်ခုစီထပ်ရှိပါတယ်။ Custom ROM ဆိုတာကတော့ MIUI Team ကနေတရားဝင်ထုတ်လုပ်ထားတာ မဟုတ်ပဲ Developer တွေက သီးသန့် ဖန်တီးထားတဲ့ ROM တွေဖြစ်ပါတယ် Error တွေရှိနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ပိုသုံးလို့ကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်း ပါနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုမရောထွေးစေဖို့ သတိပြုပါ။
အရင်က Developer ROM မှာ မြန်မာစာကို Theme Font နဲ့ အလွယ်လေး ပြောင်းလို့ရပေမယ့် ပေါ်လစီအသစ်ကြောင့် အခု Zawgyi ကို Theme font အနေနဲ့ လက်မခံတော့ပါ။ ဒါပေမယ့် Global ROM မှာ Zawgyi တရားဝင်ပါလာပါပြီ။ အလုပ်ရှုပ်မခံချင်ရင် Global ROM ထွက်ပြီးသား Model တွေမှာ Global ROM ကိုတင်ထားတာ မြန်မာစာစိတ်ချရသလို Google ပြသနာလည်းကင်းသွားပါတယ်။
Mi ဖုနျးတှမှော Android ကိုအခွခေံထားတဲ့ စနဈတဈခုရှိပါတယျ။ သူ့ကိုတော့ MIUI (မီယူအိုငျ) လို့ခေါျပါတယျ။ Android မှာပါတဲ့ Function တှထေကျကြောျလှနျပွီး လုပျဆောငျနိုငျတဲ့ လုပျဆောငျခကြျတှေ ပါဝငျပါတယျ။ Android ကိုအခွပွေုပွီး မှေးဖှားလာတဲ့ MIUI ဟာ Mi ဖုနျးတှရေဲ့အသကျပါ။ Android version ဘယျလိုပဲဖွဈနပေါစေ MIUI ကဖုနျးတဈလုံးနဲ့ တဈလုံးကို Feature တှေ ၉၉ ရာနှုနျးတူညီအောငျ ထောကျပံ့ပေးထားနိုငျတာမို့ Android Version ဟာ Mi အတှကျ ကွီးကွီးမားမားအရေးမကွီးပါဘူး။ MIUI ကိုသာ အမွဲအဆငျ့မွှငျ့တငျဖို့လိုပါတယျ။
MIUI ရဲ့အားသာခကြျကတော့ လိုသလို Customize လုပျလို့ရတဲ့ အရာတှရေယျ ကမ်ဘာပေါျက ထောငျပေါငျးမြားစှာသော Developer တှေ Designer တှကေအလုပျလုပျပေးနပွေီး အသဈအဆနျးတှေ အမွဲ Up to date ဖွဈနတောရယျ။ Active ဖွဈနပွေီး စက်ကနျ့နဲ့ အမြှ လေ့လာစရာတှေ တိုးနတေတျတဲ့ ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ Forum ကွီးရှိနတောရယျ။ ဘယျမောျဒယျကိုသုံးသုံး လုပျဆောငျခကြျ အားလုံးနီးပါး အတူတူရရှိနိုငျလို့ ကှဲပွားနတေယျ ခှဲခွားထားတယျလို့ မခံစားရတာရယျ …
MIUI မှာ China ROM နဲ့ Global ROM ဆိုပွီး အဓိက ၂ မြိုး ရှိပါတယျ။ တဈမြိုးစီမှာ Developer ROM နဲ့ Stable ROM တဈခုစီထပျရှိပါတယျ။ Custom ROM ဆိုတာကတော့ MIUI Team ကနတေရားဝငျထုတျလုပျထားတာ မဟုတျပဲ Developer တှကေ သီးသနျ့ ဖနျတီးထားတဲ့ ROM တှဖွေဈပါတယျ Error တှရှေိနိုငျပါတယျ။ အမြိုးအစား အမြိုးမြိုး ရှိပါတယျ။ ပိုသုံးလို့ကောငျးတဲ့ လုပျဆောငျခကြျတှလေညျး ပါနိုငျပါတယျ။ ဒါကိုမရောထှေးစဖေို့ သတိပွုပါ။
အရငျက Developer ROM မှာ မွနျမာစာကို Theme Font နဲ့ အလှယျလေး ပွောငျးလို့ရပမေယျ့ ပေါျလစီအသဈကွောငျ့ အခု Zawgyi ကို Theme font အနနေဲ့ လကျမခံတော့ပါ။ ဒါပမေယျ့ Global ROM မှာ Zawgyi တရားဝငျပါလာပါပွီ။ အလုပျရှုပျမခံခငြျရငျ Global ROM ထှကျပွီးသား Model တှမှော Global ROM ကိုတငျထားတာ မွနျမာစာစိတျခရြသလို Google ပွသနာလညျးကငျးသှားပါတယျ။
MIUI7ကစလို့ Mi Account ဟာ သိပ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ အခန်းကနေ ပါဝင်လာပါပြီ။ Mi ဖုန်းသုံးတော့မယ် MIUI ကိုစတင် ထိတွေ့တော့မယ်ဆိုရင် Account က လုံခြုံရေးအရလည်း အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဖုန်းစဝယ်စဉ်မှာ Setting ထဲက Mi Account ကိုကြည့်ပါ။ သူများ အကောင့်ဝင်ထားရင် ထွက်ခိုင်းပါ။ ကိုယ်ပိုင်အကောင့်နဲ့ သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆိုင်ကတာဝန်ရှိသူတွေကလည်း တစ်ခါတစ်လေ မေ့လျော့တတ်တာမို့ အကောင့်ကိုပြန်ထွက်ခိုင်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ သူများအကောင့်ကြီးနဲ့ Find Device On ပြီးပါလာရင် ပြသနာသေချာပေါက်တက်မှာပါ။
ROM ကို အခုမှ စပြီး Flash တော့မယ်ဆိုရင် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ကို အပြင်မှာ အကူအညီတောင်းပြီး အရင်ဆုံး စမ်းသပ်စေလိုပါတယ်။ Forum တွေမှာမေးတာ၊ Message တွေမှာ မေးတာတွေက စလုံးရေစဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ကို ပိုပြီး ချာချာလည်စေပါတယ်။ ရှည်လျားပြီး အမှားမခံတဲ့ စနစ်တွေကို ရှင်းပြဖို့ အွန်လိုင်းကသင့်တော်တဲ့ communication မဟုတ်ပါ။
ဖုန်းကို ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူပြီး ကလိဖို့ လေ့လာဖို့ မဟုတ်ရင် Root တာကိုအားမပေးပါဘူး။ Root ပြီးတက်တဲ့ ပြသနာက အမျိုးအစားပေါင်းများစွာ ရှိလို့ Online Support တိတိကျကျ ပေးဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ကိုယ်မနိုင်တော့ရင် ဆိုင်ပဲပြေးရပါမယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ လုံခြုံရေးပြသနာလေးတွေ တက်နိုင်ပါတယ်။ သာမာန်သုံးရုံဆို မ Root ပါနဲ့။ Bootloader Unlock မလုပ်ပါနဲ့။ လုပ်မိရင်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်မှာ တာဝန်အရှိဆုံးဆိုတာ သိရပါလိမ့်မယ်။ ဆိုင်ကို ပြသနာရှာလို့မရပါ။
MIUI7ကစလို့ Mi Account ဟာ သိပျကိုအရေးကွီးတဲ့ အခနျးကနေ ပါဝငျလာပါပွီ။ Mi ဖုနျးသုံးတော့မယျ MIUI ကိုစတငျ ထိတှေ့တော့မယျဆိုရငျ Account က လုံခွုံရေးအရလညျး အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။ ဖုနျးစဝယျစဉျမှာ Setting ထဲက Mi Account ကိုကွညျ့ပါ။ သူမြား အကောငျ့ဝငျထားရငျ ထှကျခိုငျးပါ။ ကိုယျပိုငျအကောငျ့နဲ့ သုံးသငျ့ပါတယျ။ ဆိုငျကတာဝနျရှိသူတှကေလညျး တဈခါတဈလေ မေ့လြော့တတျတာမို့ အကောငျ့ကိုပွနျထှကျခိုငျးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ သူမြားအကောငျ့ကွီးနဲ့ Find Device On ပွီးပါလာရငျ ပွသနာသခြောပေါကျတကျမှာပါ။
ROM ကို အခုမှ စပွီး Flash တော့မယျဆိုရငျ ကြှမျးကငြျသူတဈယောကျကို အပွငျမှာ အကူအညီတောငျးပွီး အရငျဆုံး စမျးသပျစလေိုပါတယျ။ Forum တှမှောမေးတာ၊ Message တှမှော မေးတာတှကေ စလုံးရစေဖွဈတဲ့ ကိုယျ့ကို ပိုပွီး ခြာခြာလညျစပေါတယျ။ ရှညျလြားပွီး အမှားမခံတဲ့ စနဈတှကေို ရှငျးပွဖို့ အှနျလိုငျးကသငျ့တောျတဲ့ communication မဟုတျပါ။
ဖုနျးကို ကိုယျ့တာဝနျကိုယျယူပွီး ကလိဖို့ လေ့လာဖို့ မဟုတျရငျ Root တာကိုအားမပေးပါဘူး။ Root ပွီးတကျတဲ့ ပွသနာက အမြိုးအစားပေါငျးမြားစှာ ရှိလို့ Online Support တိတိကကြြ ပေးဖို့ မလှယျပါဘူး။ ကိုယျမနိုငျတော့ရငျ ဆိုငျပဲပွေးရပါမယျ။ မလိုလားအပျတဲ့ လုံခွုံရေးပွသနာလေးတှေ တကျနိုငျပါတယျ။ သာမာနျသုံးရုံဆို မ Root ပါနဲ့။ Bootloader Unlock မလုပျပါနဲ့။ လုပျမိရငျလညျး မိမိကိုယျတိုငျမှာ တာဝနျအရှိဆုံးဆိုတာ သိရပါလိမျ့မယျ။ ဆိုငျကို ပွသနာရှာလို့မရပါ။
ဘက်ထရီကို တွေ့ကရာ ကြိုးတွေနဲ့ ယူသွင်းတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့ ဖုန်းပိတ်ကျသွားသည်အထိ မသုံးပါနဲ့၊ ၂၀ အောက်မရောက်သေးပဲ ခဏခဏ Charging သွင်းတာမျိုး မလုပ်မိပါစေနဲ့ ဖုန်းရဲ့ ဘက်ထရီ သက်တမ်းကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဘက်ထရီမခံတော့ဘူး ဆိုတဲ့ အခြေအနေဟာ အထက်ပါ အကြောင်းအရာတွေကြောင့် ၈၀% ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Quick Charge စနစ်ပါတဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင် A ပိုမြင့်ပါတယ်။
ဖုန်းတွေဟာ သုံးနေရင် အနည်းနဲ့ အများ ပူတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ သာမာန်ထက်ပိုပူတတ်ပါတယ်။ အားသွင်းထားစဉ် ပူတာမျိုးဆို သတိရှိပါ။ ပလပ်ပြောင်းထိုးပါ နေရာပြောင်းအားသွင်းကြည့်ပါ။ ဖုန်းကိုပိတ်ပြီး အားသွင်းကြည့်ပါ။ အမြဲပူနေရင်တော့ သတိရှိပါစေ။ ရောက်နေတဲ့နေရာက Network လိုင်းတွေအားနည်းတဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း ဖုန်းကပူလာတတ်တာကို သတိပြုပါ။
ဘကျထရီကို တှေ့ကရာ ကွိုးတှနေဲ့ ယူသှငျးတာမြိုး မလုပျပါနဲ့ ဖုနျးပိတျကသြှားသညျအထိ မသုံးပါနဲ့၊ ၂၀ အောကျမရောကျသေးပဲ ခဏခဏ Charging သှငျးတာမြိုး မလုပျမိပါစနေဲ့ ဖုနျးရဲ့ ဘကျထရီ သကျတမျးကို ထိခိုကျစပေါတယျ။ ဘကျထရီမခံတော့ဘူး ဆိုတဲ့ အခွအေနဟော အထကျပါ အကွောငျးအရာတှကွေောငျ့ ၈၀% ဖွဈတတျပါတယျ။ Quick Charge စနဈပါတဲ့ဖုနျးတှဆေိုရငျ A ပိုမွငျ့ပါတယျ။
ဖုနျးတှဟော သုံးနရေငျ အနညျးနဲ့ အမြား ပူတတျပါတယျ။ တဈခါတဈလေ သာမာနျထကျပိုပူတတျပါတယျ။ အားသှငျးထားစဉျ ပူတာမြိုးဆို သတိရှိပါ။ ပလပျပွောငျးထိုးပါ နရောပွောငျးအားသှငျးကွညျ့ပါ။ ဖုနျးကိုပိတျပွီး အားသှငျးကွညျ့ပါ။ အမွဲပူနရေငျတော့ သတိရှိပါစေ။ ရောကျနတေဲ့နရောက Network လိုငျးတှအေားနညျးတဲ့ အခါမြိုးမှာလညျး ဖုနျးကပူလာတတျတာကို သတိပွုပါ။
Software တစ်ခုခုသွင်းတော့မယ်ဆိုရင် Allow လုပ်ခိုင်းဖို့ စက္ကန့်တွေ စောင့်ဆိုင်းနေရတာ
ဖြေရှင်းရန် – Setting >> Additional Setting >> Privacy >> Unknown Sources ကိုအမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ
Developer Option မတွေ့တာ
ဖြေရှင်းရန် – Setting >> About Phone >> MIUI Version ကို ခုနှစ်ချက်ဆက်တိုက်နှိပ်ပေးပါ
Download Size ပြသနာတက်ပြီး မဒေါင်းပဲရပ်နေတာ
ဖြေရှင်းရန် – Download Application ကိုရှာပါ အပေါ်ဘက်ထောင့်ရှိ အစက်လေးသုံးစက်မှ တစ်ဆင့် Setting ကိုဝင်၍ Download Size Limit ကို Unlimited ထားပေးပါ
Facebook ကနေ Message ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Messenger တက်မလာတာ သို့မဟုတ် Messenger popup တက်မလာတာ
Zapya ကချိတ်လို့ရပြီး ဘယ်ကိုမှပို့လို့မရတာ
ဖြေရှင်းရန် – Security Application ကိုရှာပါ Data Usage >> Restrict Data Usage >> Zapya ကို Data ရော WLAN မှာပါ အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ
ဖြေရှင်းရန် – (၁) Setting >> Sound and Vibration >> Phone Ringtone>> အပေါင်းကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
Screen ကို လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ စုဆွဲလိုက်ရင် Home Screen ရဲ့ Menu ကိုရောက်သွားပြီး လက်သုံးချောင်းနဲ့ စုဆွဲလိုက်ရင်တော့ Home Screen Preview ကိုရောက်သွားမှာပါ
ကင်မရာကိုဖွင့်ထားပြီး Home back menu ခလုတ်သုံးခုထဲက menu ခလုတ်ကိုဖိထားရင် Camera setting ကိုမြင်ရမှာပါ။ Dial Pad ကိုဖွင့်ထားပြီး နှိပ်ရင် Call Setting .. Message ကိုဖွင့်ထားပြီး နှိပ်ရင် Message setting စသဖြင့် မြင်ရပါမယ်။
Second Space ဆိုတာက ဖုန်းတစ်လုံးကိုပဲ ၂ လုံးပုံစံ ခွဲထားတာပါ။ သီးခြားကန့်သတ်မှုတွေလုပ်လို့ရသလို Password ခံထားလို့လည်းရပါတယ်။ မလိုချင်တော့ရင် Second Space ကိုပြန်ဖျက်နိုင်ပါတယ်
Dual app ဆိုတာက App တစ်ခုကို ၂ ခုဖြစ်အောင်ပွားသုံးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။ SIM နှစ်ကတ်သုံးထားလို့ Viber ၂ ခုဖွင့်ချင်တာ Messenger နှစ်ခုသုံးချင်တာ Facebook အကောင့် ၂ ခုသုံးချင်တာ တွေအတွက် လည်းအဆင်ပြေသွားစေမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်ပါ
ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး အသစ်လဲရင် Data တွေပျောက်မှာ မစိုးရတော့ပါဘူး။ Setting တွေကအစ အကုန်လုံး ဟိုဘက်ဖုန်းအသစ်ဆီ လက်ရှိအတိုင်း Transfer လုပ်ပစ်နိုင်မယ့် Mi Mover က Setting ထဲမှာ ရှိပါတယ်။
ပုံကို Hide လုပ်မိလို့ ပျောက်သွားသူတွေအတွက်က Gallery ကိုဖွင့်ပြီး Menu Key ကိုနှိပ်ထားကာ Setting ခေါ်လိုက်ပါ။ အဲထဲမှာ Show Hidden Album ကိုပြလိုက်ရင် ကိုယ့်ပုံတွေ ရေးရေးပေါ်ပါပြီ ဖိထားပြီး Unhide လုပ်ပါ။
အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သိသင့်သိထိုက်တာလေးတွေ ရွေးပြီး ထုတ်နှုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆက်ပြီး သုံးကြည့်မယ်ဆိုရင် တော်တော်လေး နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ရရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေသိထားရင် ဆက်ပြီး ဖတ်မှတ် လေ့လာသုံးကြည့်ဖို့ ပိုအဆင်ပြေသွားမှာပါ။
Software တဈခုခုသှငျးတော့မယျဆိုရငျ Allow လုပျခိုငျးဖို့ စက်ကနျ့တှေ စောငျ့ဆိုငျးနရေတာ
ဖွရှေငျးရနျ – Setting >> Additional Setting >> Privacy >> Unknown Sources ကိုအမှနျခွဈပေးလိုကျပါ
Developer Option မတှေ့တာ
ဖွရှေငျးရနျ – Setting >> About Phone >> MIUI Version ကို ခုနှဈခကြျဆကျတိုကျနှိပျပေးပါ
Download Size ပွသနာတကျပွီး မဒေါငျးပဲရပျနတော
ဖွရှေငျးရနျ – Download Application ကိုရှာပါ အပေါျဘကျထောငျ့ရှိ အစကျလေးသုံးစကျမှ တဈဆငျ့ Setting ကိုဝငျ၍ Download Size Limit ကို Unlimited ထားပေးပါ
Facebook ကနေ Message ကိုနှိပျလိုကျရငျ Messenger တကျမလာတာ သို့မဟုတျ Messenger popup တကျမလာတာ
ဖွရှေငျးရနျ – Setting >> Installed App >> Messenger >> Permission Manager >> အောကျဆုံးက Display Popup Window ကိုအမှားလေးဖွုတျလိုကျပါ။
Zapya ကခြိတျလို့ရပွီး ဘယျကိုမှပို့လို့မရတာ
ဖွရှေငျးရနျ – Security Application ကိုရှာပါ Data Usage >> Restrict Data Usage >> Zapya ကို Data ရော WLAN မှာပါ အမှနျခွဈပေးလိုကျပါ
ဖွရှေငျးရနျ – (၁) Setting >> Sound and Vibration >> Phone Ringtone>> အပေါငျးကိုနှိပျပွီး ကိုယျလိုခငြျတဲ့ ဖိုငျကိုရှေးပေးလိုကျပါ
Screen ကို လကျနှဈခြောငျးနဲ့ စုဆှဲလိုကျရငျ Home Screen ရဲ့ Menu ကိုရောကျသှားပွီး လကျသုံးခြောငျးနဲ့ စုဆှဲလိုကျရငျတော့ Home Screen Preview ကိုရောကျသှားမှာပါ
ကငျမရာကိုဖှငျ့ထားပွီး Home back menu ခလုတျသုံးခုထဲက menu ခလုတျကိုဖိထားရငျ Camera setting ကိုမွငျရမှာပါ။ Dial Pad ကိုဖှငျ့ထားပွီး နှိပျရငျ Call Setting .. Message ကိုဖှငျ့ထားပွီး နှိပျရငျ Message setting စသဖွငျ့ မွငျရပါမယျ။
Second Space ဆိုတာက ဖုနျးတဈလုံးကိုပဲ ၂ လုံးပုံစံ ခှဲထားတာပါ။ သီးခွားကနျ့သတျမှုတှလေုပျလို့ရသလို Password ခံထားလို့လညျးရပါတယျ။ မလိုခငြျတော့ရငျ Second Space ကိုပွနျဖကြျနိုငျပါတယျ
Dual app ဆိုတာက App တဈခုကို ၂ ခုဖွဈအောငျပှားသုံးတဲ့ လုပျဆောငျခကြျပါ။ SIM နှဈကတျသုံးထားလို့ Viber ၂ ခုဖှငျ့ခငြျတာ Messenger နှဈခုသုံးခငြျတာ Facebook အကောငျ့ ၂ ခုသုံးခငြျတာ တှအေတှကျ လညျးအဆငျပွသှေားစမေယျ့ လုပျဆောငျခကြျပါ
ဖုနျးတဈလုံးနဲ့ တဈလုံး အသဈလဲရငျ Data တှပြေောကျမှာ မစိုးရတော့ပါဘူး။ Setting တှကေအစ အကုနျလုံး ဟိုဘကျဖုနျးအသဈဆီ လကျရှိအတိုငျး Transfer လုပျပဈနိုငျမယျ့ Mi Mover က Setting ထဲမှာ ရှိပါတယျ။
ပုံကို Hide လုပျမိလို့ ပြောကျသှားသူတှအေတှကျက Gallery ကိုဖှငျ့ပွီး Menu Key ကိုနှိပျထားကာ Setting ခေါျလိုကျပါ။ အဲထဲမှာ Show Hidden Album ကိုပွလိုကျရငျ ကိုယျ့ပုံတှေ ရေးရေးပေါျပါပွီ ဖိထားပွီး Unhide လုပျပါ။
အသုံးဝငျမယျလို့မြှောျလငျ့ပါတယျ။ သိသငျ့သိထိုကျတာလေးတှေ ရှေးပွီး ထုတျနှုတျပေးလိုကျပါတယျ။ ဆကျပွီး သုံးကွညျ့မယျဆိုရငျ တောျတောျလေး နှဈသကျဖှယျကောငျးတဲ့ ခံစားခကြျမြိုး ရရှိပါလိမျ့မယျ။ ဒါတှသေိထားရငျ ဆကျပွီး ဖတျမှတျ လေ့လာသုံးကွညျ့ဖို့ ပိုအဆငျပွသှေားမှာပါ။